Ebee ka ịchọta Mint Na Genshin Impact? Obere ndu ❤️ GOLUEGO.COM
Ebee chọta Mint na Genshin Impact? Obere ndu
emelitere ikpeazụ Abụọ 20, 2021
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ebe chọta mint na Genshin Impact, mgbe ahụ ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị, n'ihi na na obere ntuziaka a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ngwa a Genshin Impact.
Dị ka ngwa ndị ọzọ niile dị na egwuregwu ahụ, pepemint bụ nri dị mkpa a na-eji maka ọtụtụ usoro nri, ị kwesịrị ịnwale ịnwe ezigbo ọkọnọ, nke bụ ihe ntuziaka a ga-enyere gị aka.
N'okpuru ị ga-ahụ ebe kachasị mma maka ịzụ ahịa ma chọta mint na Genshin Impact, gbakwunye ebe ị nwere ike iwe ihe ubi buru ibu n'efu.
Ebe Kachasị Mma Mzụta Mint Na Genshin Impact
Enwere ike ịzụta Mint n'otu ebe Genshin Impact, nke na - eme ka ọ bụrụ ntakịrị nsogbu iji soro karịa ọtụtụ ihe ị na - achọ iji chọọ. Ọ dabara nke ọma, ị ga-enwe ike ịchọta nke a na-ejegharị ejegharị botanist nnọọ mmalite nke egwuregwu, ọ bụrụhaala na ị na-ahụ windrise osisi. Dị mfe, nri?
Nwere ike ịchọta Chloris, botanist na-ejegharị ejegharị, n'ụzọ dị n'ebe ugwu nke osisi Windrise.
Naanị chọta ụzọ ma nọrọ na ya dịka ọ dị na minimap, ahapụla. N'ikpeazụ, ị ga-ahụ Chloris n'ọhịa, na-agba ọsọ site na ebe ruo ebe ọzọ na-achọ osisi. Ga-enwe 10 mints na ngwaahịa kwa ụbọchị, gbakwunye ụda nke nri na ngwa ahịa ndị ọzọ na-adịkarị ụkọ.
Ebe Kachasị Mma Findchọta Mint Na Genshin Impact
Enwere ebe abụọ ị nwere ike ịchọta mint na Genshin Impact, naanị ebe ndị ahụ buru ibu ma buru oke. Anyị enweghị ike ịkọwapụta otu ebe na eserese ngosi ebe ị nwere ike ịmalite owuwe ihe ubi, n'ihi na ọ bụ ebe niile na mgbago ugwu Mondstadt.
Akpa, ị ga-ele anya na ugwu ikuku, nke dị na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke obodo Mondstadt. Ugwu a juputara n’anu anumanu di elu, o nwekwara ike isiri ha ike igafe.
N'aka nke ozo, ha nwekwara mint na-ezo n'ime ugwu, yabụ eleghi anya ọ bara uru iburu ebumnuche nke abụọ na mpaghara a ma buru mint n'oge ọ bụla ị gafere ya.
Na mgbakwunye na Ugwu Stormbearer, ị ga-agagharị ọnụ nke Brightcrown kaniyon y Irlọ Stormterror. Ebe ndị a siri ike ịgafe, ọ ga-adị gị mkpa ịmechaa ọtụtụ akụkọ akụkọ tupu ịgagharị Stormterror's Lair, mana enwere ọtụtụ ihe ịchọta ebe a ma ọ bụrụ na ị jiri nlezianya nyochaa ma debe anya gị. Naanị isi n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke obodo Mondstadt.
genshin impact na-agbasi mbọ ike: Nduzi Omume
Choo onye enyo na Genshin Impact
Esi see foto Genshin Impact
Ifuru Adventurer na Genshin Impact
Na Mbụ	Osote 1 nke 61